China efikelelekayo Laser umsiki mveliso kunye nabenzi | Qingyuan
Ubungakanani betafile 1500x3000mm / 1500x4000mm / 1500x6000mm
Ukusika intloko URaytool (ukujonga ngokuzenzekelayo)
Umatshini wokusika we-fiber oMandla oPhakathi usetyenziswa ngokubanzi ekuqhubeni i-carbon yentsimbi, i-stainless steel still, i-alloy steel, iphepha elihlanganisiweyo, i-aluminium sheet ukusika ngokukhawuleza. Ngokwesiqhelo sebenzisa i-forkitchenware, ukugcwalisa ikhabhathi, ikheshi kunye nemveliso eyahlukeneyo yokusika iikhabhathi.
I-1000W servo eyodwa yokuqhuba, iFuji, Japan
Ukuqhuba kabini kwi-servo, eFuji, eJapan
I-servo yokuqhuba enye ye-400W, iFuji, Japan
I-NPN, i-Omron, eJapan
≤10mm ngentsimbi yekhabhoni
Cheeron Laser(QY Laser) yaziwa njengenye yezona zinkulu kwaye ziingcali ngo-1530 1000w ifayibha laser cuttUmr Abenzi nabathengisi e China. Kunye neqela labasebenzi abaqeqeshiweyo nabasebenza kakuhle, sinokukunika i-15301000w ifayibha laser ukusika umatshini ngexabiso eliphantsi kunye nomgangatho olungileyo ngenkonzo ebalaseleyo.
Ukusika iividiyo ngakumbi apha ngezantsi
Egqithileyo 3KW CNC Laser umsiki
Okulandelayo: Umsiki omncinci we-Laser-500mmx500mm
Ifayibha I-Laser Ukusika Umatshini
Umbhobho wokuCoca uMatshini weLaser
Umbhobho wokusika weFibre Laser
Iphepha le-Cnc yeFibre engenanto